साउन महिनाको मनोविज्ञान – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
साउन महिनाको मनोविज्ञान
२०७१ श्रावण १, बिहीबार ०४:१८ गते
आज साउने संक्रान्तिको दिन । आफूलाई मनपर्ने मीठोमीठो खाने दिन । विवाहित महिलाहरुका लागि नाच्दै माइत जाने दिन । झरीसँगसँगै आनन्द र खुसी हुने दिन । अनि, भगवान् शिवजीको प्रिय महिना । शिव पुकार्ने महिलाहरुका लागि रसिलो मौसम । वातावरण नै हरियाली हुने बेला । प्रकृतिसँग मीत लगाउने बेला । चराचुरूङ्गी छमछम नाच्ने समय । मयूर चरी खुसीसाथ शिव भगवान्लाई डुलाउने समय ।
‘वाह’ कस्तो रमाइलो महिना आयो साउन ! साउन महिनामा जताततै हरियाली हुने हुँदा सबैका लागि यो महिना रङ्गीन हुन्छ । बेलाबेलामा परिरहने झरीले सबैको मन रूझाएको हुन्छ । साउन लागेपछि नै पर्वको चटारो सुरू हुन्छ । महिला साउन लाग्नासाथ बेफुर्सदिला हुन्छन् । यसपटक पानी ढिला पर्दा ग्रामीण भेगका महिलाहरु रोपाइँमा व्यस्त नै छन् । सहरका महिलाहरुलाई साउन महिना लाग्दा नलाग्दै हरियो वस्त्रले ढाकिसकेको छ ।
झरी, प्रकृति र हरियो रंगको फ्युजन हो, साउन महिना । साउनको झरीमा नरूझेका मानिसहरु सायदै पाइन्छन् । भनिन्छ, साउनमा पनि नरूझेको मानिस अघि–पछि कहाँ रूझ्छ र ! साउनमा झरीले जमिनमात्र होइन, मायालुको मन पनि भिजाएको हुन्छ । साउनले सताउँछ सँगीलाई, आफ्ना प्राण प्याराको सम्झनामा । प्राण प्याराको सम्झनाले सताएपछि सँगीहरु गगन विरहीको शब्द सापट लिएर गाउँछन्–
‘पानीको रिमझिम बर्षात्को बेला
लाजले व्यर्थै किन छोपेकी
लाजले व्यर्थै किन छोपेकी ?’
साउने व्रतको चलन ः
भनिन्छ, साउन महिना भगवान् शिव खुसी हुने महिना हो रे ! शिवको मनपर्ने रंग हरियो भएकाले महिलाहरु हरियो वस्त्रमा सजिएर भगवान् शिवको व्रत लिन्छन् रे ! हुन पनि साउनमा त महिलाहरुले शिरमा रिबनदेखि खुट्टाको चप्पलसम्म हरियो लगाउँछन् ।
महिलाहरु हरियो टीका, चुरा, पोते, सारी लगाएर शिवको आराधना गर्छन् । उनीहरु साउनको सोमबार व्रत बस्छन् । ‘यसपटक त साउनमा चारवटामात्र सोमबार परेको छ, सोमबारे व्रत त लिनैप¥यो नि !’ भरतपुरकी भारती कुँवरले भनिन्, ‘बिहे नगर्दा राम्रो पति पाऊँ भनेर बसियो, अब त पतिको दीर्घायुमा बस्ने होला नि ।’ उनले थपिन्, ‘मेरो त श्रीमान् पनि श्रीमतीको दीर्घायुको कामना गर्दै व्रत बस्नुहुन्छ ।’
विवाहित महिलामात्र नभएर कुमारीदेखि वृद्धवृद्धा महिलासमेत सोमबारे व्रत बस्छन् । कोही महिलाहरु निराहार व्रत बस्छन् । केका लागि व्रत बस्नुहन्छ ? भनेर कसैले प्रश्न राखे बाहिर खुलेर बोल्न चाहँदैनन्, सँगीहरु । तर, विवाहित महिलाले पतिको आयु लामो होस् भनेर व्रत बसेका हुन्छन् भने अविवाहित महिलाहरु राम्रो पति पाइयोस् भन्ने कामनामा व्रत बसेका हुन्छन् ।
नारायणगढकी शर्मिला भट्टराई आफूले थाहा पाउने बेलादेखि नै साउने सोमबारको व्रत बसेको बताउँछिन् । साउन महिनामा सोमबारको व्रत बस्दा परिवारमा सबैको राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास भएकाले व्रत बसेको उनले बताइन् । भन्छिन्, ‘व्रतले सबैलाई राम्रो गर्ने जनविश्वास भएर बसेकी हुँ ।’
स्कुल पढ्ने किशोरीदेखि कलेज पढ्ने ठिटीहरु पनि साउने सोमबार व्रत बस्ने चलन छ । साउन सोमबार शिवमन्दिरमा धेरै किशोरी तथा महिलाहरुको भीड नै लाग्छ । थालीमा अक्षता र रातो टीका लिएर गएका किशोरीहरु लाइनमा बसेर भए पनि शिव भगवान्सँग हात जोडी असल वर माग्छन् । भगवान् शिवलाई खुसी पार्न नाचगान र भजनसमेत गाउने चलन छ, साउनमा । साउन सोमबारको व्रत बस्दा शिव भगवान् खुसी हुने र मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास छ ।
हाम्रो समाजमा देखासिकी गरेर पनि व्रत बस्ने चलन छ । घरमा आमा, दिदी साउने सोमबार व्रत बसेको देखेर कुरा नै नबुझी बालबालिका समेत व्रत बस्ने गरेको पाइन्छ । ‘आमा र दिदी व्रत बस्नुभयो, त्यसैले म पनि बसेकी हुँ’, एक बालिकाले भनिन्, ‘खै, किन व्रत बस्छन् मलाई त थाहा छैन, फलफूल खान पाइने भएर हो कि !’
साउन महिनाको सोमबार व्रत बस्ने चलन नेवारी संस्कृतिमा छैन । तर, बाहुन–क्षेत्री व्रत बसेको देखेर उनीहरुमा पनि यो संस्कृति भित्रिएको छ । बौद्ध संस्कृतिमा पनि सोमबारे व्रत बस्ने कुरा उल्लेख छैन । सोमबारे व्रत बस्ने चलन कहिलेबाट सुरू भयो भन्ने कुरा हिन्दू धार्मिक ग्रन्थहरुमा पाइएको छैन । भागवत् शास्त्रमा जीवन मंगलमय बनाउन साउनको सोमबार शिवको उपासना गर्नु भन्ने कुरा उल्लेख छ ।
पानी छल्ने महिना ः
यस महिनालाई पानी छल्ने महिना पनि भनिन्छ । विवाहको पहिलो वर्ष नवदुलहीहरु साउन महिनामा पानी छल्न माइती घर जान्छन् । हिजोआज त नवदुलहीमात्र होइन, पुरानी दुलही पनि पानी छल्ने भन्दै माइत जाने गरेका छन् ।
‘पानी छल्न एक हप्ता माइत जाने सुरसारमा छु’, भरतपुर–१० की २३ वर्षीया विन्दा रानाभाटले भनिन्, ‘पहिल्यैदेखि चलिआएको चलन हो, मान्नुपर्छ ।’ हरियो वस्त्र लगाएर साउनमा माइत जानेहरुको ताँती नै देखिन्छ । ‘माइतीघरमा गएर आमासँग व्रत बस्नुको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ नि’, विन्दाले भनिन्, ‘विशेषगरी, नवदुलही नै साउनमा माइत जान्छन् ।’
साउनमा झमझम पानी परेको हुन्छ । नवदुलहीहरु पहिलो वर्ष लोग्नेको घरमा परेको पानी छल्नका लागि माइत पुगेका हुन्छन् ।
सवै वस्त्र हरियो ः
भनिन्छ, साउन हरियो महिना हो रे ! यतिबेला प्रकृति पनि हरियो रंगमा डुबुल्की मारेकी हुन्छिन् । साउनमा विवाहित होस् या अविवाहित, सबै महिलाले प्रकृतिसँग मिल्ने हरियो वस्त्र लगाएका हुन्छन् । शिरको रिबन, टीका, पोते, चुरा, ब्लाउज र सारी सबै हरियो पोसाकमा सजिएका हुन्छन्, चेलीहरु । साउनमा किन हरियो लगाउँछन् महिलाहरु ? यसको उत्तर त धार्मिक शास्त्रमा छैन । भागवत् शास्त्रमा हरियो रंग शिवको मनपर्ने रंग हो भन्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसैले, शिवलाई खुसी पार्न महिलाहरुले हरियो वस्त्र लगाएका हुन् । शिवको वाहन मयूर पनि हरियो हुन्छ । हरियो मयूरमाथि बसेका शिवलाई खुसी पार्न पनि हरियो रंग लगाएर उपसना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ ।
महिलाहरु हरियो वस्त्र धारण गरी फुरूङ्ग भएर व्रत बसेका हुन्छन् । साउनमा हरियो वस्त्र लगाउने चलनले हिजोआज फेसनको रुप लिएको छ । साना नानीदेखि कपाल फुलेका वृद्ध आमाहरु पनि हरियो चुरा लगाएका हुन्छन्, साउनमा । ‘साउनमा हरियो ब्लाउज र सारीमा हरियो चुरा छ्याङछ्याङ नबजाउने महिलाहरु को होलान् र खै !’ प्रेसिडेन्सीमा बीबीए पढिरहेकी अञ्जु खनालले भनिन्, ‘आफ्नो मनोकांक्षा पूरा होस् भनेर शिवलाई खुसी पार्नका लागि हरियो पहिरन लगाएकी हुँ । तर, हिजोआज साउनको हरियो पहिरन सबैका लागि फेसन पनि भएको छ ।’
मायाको मौसम ः
साउन माया मौलाउने मौसम हो । यही समयमा हो, वृन्दावनमा राधा र कृष्णले रासलीला रचाएका । त्यसैले होला, साउनलाई मायाको मौसम भनिन्छ । मौसम रसिलो हुनाले मायाको पनि रसपान गराउँछ । परदेशिएका प्रेमीको सम्झनाले सँगीलाई सताउँछ ।
भनिन्छ, साउनमा नगरेको माया अघि–पछि कहिले गरिन्छ र ! साउने झरीसँगै मायाको बर्षात् हुन्छ । त्यसैले त साउनमा रूझेर भए पनि मायाको पगरीमा बेरिएका हुन्छन्, ठिटाठिटीहरु । यही मौसममा शिवले पार्वतीलाई बेसरी रूचाएका थिए रे !
‘साउन महिना त माया गर्ने महिना हो । एसएलसी पास गरियो, साउन लागेपछि कलेज खुल्छ । अब झरीसँग कलेजतिरै माया वर्षन्छ’, एक ठिटोले भने, ‘साउनमा प्रेमीको सम्झनाले सँगीलाई सताउँछ, सँगीको सम्झनाले प्रेमीलाई ।